ကျွန်းသေးသေးသို့ထွက်ခွာခြင်း - ၁ - Saturngod
ကျွန်းသေးသေးသို့ထွက်ခွာခြင်း – ၁
Posted on Updated December 20, 2010 November 8, 2009 by saturngod
ကျွန်းသေးသေးလေးမှာ အလုပ်လုပ်တော့မယ်လို့ တကယ်ဆုံးဖြတ်ပြီးပြီလား။ တကယ်ကော ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိလား။ ကိုယ့်ရဲ့ အရည်အချင်း အတွေ့အကြုံတွေကို တခြားသူတွေ reference မပါခင် ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် အပြည့်အဝ အာမခံနိုင်လား။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ မနေချင်လို့ နိုင်ငံခြားထွက်မယ်ဆိုတဲ့ အူကြောင်ကြောင် အတွေးအခေါ်တွေကို ခဏလောက်မေ့ပြီး ဒီနိုင်ငံမှာ ဘာတွေလုပ်နေလဲ။ သူ့တို့ business flow က ဘာလဲ။ အဓိက ဘာ tool တွေ ကို အသုံးပြုလဲ။ ကိုယ်နဲ့ ကိုက်တာတွေ ရှိလားဆိုတာကိုကော လေ့လာပြီးပြီလား။
အရင်ဆုံးတော့ ဘာတွေ လုပ်ရမလဲဆိုတာကို ကျွန်တော်မပြောခင် အောက်က link တွေကို သွားဖတ်သင့်တယ်။
If you want to come to Singapore for IT career – 1
If you want to come to Singapore for IT career – 2
အဲဒါတွေကိုတော့ ကို Zack ရေးထားတာတွေပေါ့။ နောက်ပြီး IT Mg Mg ရေးထားတာလေးတွေကိုလည်း ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါအုံး။
စင်္ကာပူကို လာမယ်ဆိုရင် အပိုင်း(၁)
စကာင်္ပူကို လာမယ်ဆိုရင် အပိုင်း(၂)
အဲဒါတွေကို အရင်ဖတ်လိုက်အုံးဗျာ။ ပြီးရင် ကျွန်တော်လိုတာလေးတွေ ထပ်ဖြည့်ရေးပေးမယ်။ အဲဒီ ၂ ခုနဲ့ တင်တော်တော်လေး ပြည့်စုံတယ်ဗျ။ ကျွန်တော်ကတော့ ကို Zack ကို ကိုဇင်မင်း (IT Mg Mg)ကိုကော ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဘာတွေ ပြင်ဆင်ရမလဲဆိုတာကို သူတို့တွေ သေသေချာချာ ရေးပေးထားပါတယ်။
« MacForUs ကျွန်းသေးသေးသို့ထွက်ခွာခြင်း – ၂ »
I visited this sight for the first time and I found it best but I would like to add that currently we are living in the era of IT but unfortunately more than half of world population is illiterate. Out of thoseafew are computer and internet familiar so the target market for internet marketing is niche. Therefore the developed nations should promote mcse education as well as computer literacy in these developing areas so the target market can be increased in future.
Pingback: Singapore Post Collection | Saturngod